चितवनमा कोरोना सङ्क्रमणबाट थप ६ जनाको मृत्यु - Kantipur Sandesh
10th May 2021, 12:37 PM
चितवन । चितवनमा दुई अस्पतालमा आइतबार राती मात्र छ सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ ।
चितवन मेडिकल कलेजमा उपचाररत पाँच जनाको र भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत एक जनाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा दुई चितवनका र अन्य बाहिरी जिल्लाका छन् ।
यसैगरी रुपन्देहीकै देवदह नगरपालिका–९ का ४१ वर्षीय पुरुषको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । चितवन मेडिकल कलेजका अनुसार निमोनियाको समस्या भई वैशाख २२ गते अस्पताल भर्ना भएका उनामा सोही दिन कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै कोभिड सघन उपचार कक्षमा उपचारका क्रममा उनको आइतबार राती १०ः३० बजे मृत्यु भएको हो ।-रासस
कोरोना संक्रमणबाट देशमा थप ५१ जनाको मृत्यु
असार ६, २०७८, ४:५७ PM
कोरोना अपडेटः थप २ हजार ४४२ जनामा देखियो सङ्क्रमण
असार ६, २०७८, ४:४९ PM
असार ६, २०७८, ११:०६ AM
कोरोना संक्रमणबाट देशमा थप ३४ जनाको मृत्यु
असार ५, २०७८, ४:५९ PM
कोरोना अपडेटः थप २ हजार ४०१ जनामा देखियो सङ्क्रमण
असार ५, २०७८, ४:४८ PM
कोरोना संक्रमणबाट देशमा थप ४४ जनाको मृत्यु
असार ४, २०७८, ५:५३ PM
उपत्यकाका प्रजिअहरुको बैठक बस्दै, निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाउने बारे निर्णय हुने
सुनको मूल्य निरन्तर घट्दै, हेरौँ कती छ आज भाउ ?
विदेशी मुद्रा साट्दै हुनुहुन्छ ? हेरौं आजको विनिमय दर